Sintomy Fokker D.21 1938-40 MSFS 2020 - Freeware
Ity no fiaramanidina voalohany niova avy FSX mankany amin'ny MSFS 2020 ary jereo ny vokany! Mahavariana ny fomba hanatsaran'ny MSFS 2020 ny fandikana ny maodely 3D. Ny fiaramanidina dia miavaka amin'ny sary raha ampitahaina amin'ny azy FSX Malagasy Bible. Ny fandikana ny gilasy 3D dia somary kely lavitra noho ny ivelany fa mbola tena tsara tarehy. Miasa ny refy 3D, mandeha tsara ny fiaramanidina.
Ity Fokker D.21 ity dia misy ati-doha roa (ary modely roa ihany koa), ny iray avy tamin'ny 1938 ary ny iray tamin'ny 1940, dia vakio ny antontan-taratasy hianaranao bebe kokoa momba ireo atiny ireo, manana tantara izy ireo. Amin'izao fotoana izao fotsiny ho an'ny MSFS 2020 ny antontan-taratasy dia eo amin'ny Desktop anao ao amin'ny "Rikoooo Add-ons "folder, na ao amin'ny Community folder.
Azonao atao ny manohana ny add-on mpamorona (Daan Kaasjager) miaraka amina fanomezana ho an'ny azy Paypal
Noforonina 24 Oct 2020
Nohavaozina taminy 15 Dec 2020
Format Use FSX (mdl) endrika lova
Modely nataon'i Daan Kaasjager (Dutcheeseblend). Fivadihana MSFS 2020 nataon'i Priller avy amin'ny Sim-Outhouse.com